မိခင်တစ်ဦးဖြစ်နေခြင်းကြောင့် အဖော်အချွတ် ဇာတ်ဝင်ခန်းများကို ရိုက်ကူးတော့မည် မဟုတ်ကြောင?? - Yangon Media Group
မိခင်တစ်ဦးဖြစ်နေခြင်းကြောင့် အဖော်အချွတ် ဇာတ်ဝင်ခန်းများကို ရိုက်ကူးတော့မည် မဟုတ်ကြောင??
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄
မင်းသမီးကီရာနိုက်တလေက ၎င်းသည် အသက် (၃ဝ)အရွယ် မိခင်တစ်ဦး ဖြစ်လာ ခြင်းကြောင့် နောက်ထပ်အဖော်အချွတ် ဇာတ်ဝင်ခန်းများကို ရိုက်ကူးတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ် မင်းသမီးက ၎င်း၏အနုပညာခရီးလမ်း အစပိုင်းတွင် အဆင်ပြေခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်၌ ရုပ်ရှင်များတွင် အဖော်အချွတ် ဇာတ်ဝင်ခန်းများကို ရိုက်ကူးရန် ခန္ဓာကိုယ်က နှစ်ဆအရွယ်ဖြစ်လာကြောင်း ဝန်ခံ ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက ”အခုထက် အရင်တုန်းက အဖော်အချွတ်တွေ ရိုက်ရတာ ပိုသက်သောင့်သက်သာရှိပါတယ်။ ကျွန်မမှာ ကလေးရှိပါတယ်။ အသက် (၃ဝ)လည်း ကျော်ပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကျွန်မ ကျေနပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီထက်ပို ပြီး ကျွန်မ ထပ်လုပ်သင့်တယ်လို့ မခံစားရပါ ဘူး”ဟုဆိုသည်။ ထို့အပြင် အသက် (၂၂)နှစ် အရွယ်တွင် ¤င်း၏ အနုပညာလုပ်ငန်းကို ဝေဖန်ခဲ့ကြသူများကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနောက် ယင်းအရွယ်တွင် စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ဖူးကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
‘Bend It Like Beckham’, ‘Love Actually’ နှင့် ‘Pirates of the Carib-bean’ ရုပ်ရှင်တို့တွင်ပါဝင်ခဲ့သော လူငယ် ဇာတ်ရုပ်တို့ဖြင့် နာမည်ကြီးခဲ့သည့် မင်း သမီးကီရာက ၎င်း၏ ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုကို ဝေဖန်ခဲ့မှုကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့ရသည်။ ၎င်းက ”ကျွန်မ အသက် (၂၂)နှစ်အ ရွယ်တုန်းက ဘဝပျက်ခဲ့ရတယ်။ အရာရာတိုင်းဟာ ရပ်တန့်သွားပြီး အပိုင်းပိုင်းကွဲကြေသွားသလို ခံစားခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ဦး နှောက်ကလည်း အပိုင်းပိုင်းကွဲ သွားခဲ့သလိုပဲ”ဟု ပြောခဲ့သည်။
''လူငယ်များ ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာ ဝင်ရောက်ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ပါတီကိုလည်း လေ့လာပါ- သူရဥ?
မွန်ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲနှင့်ခရိုင်၊ မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများ တွေ့ဆုံ
ရွှေပြည်သာတွင် သက်ငယ်မုဒိမ်းသေဒဏ်ပေးသည့်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးရေး တောင်းဆိုရန် ပြည်သူလက်မှတ်ကောက
ဆီးရီးယားမှ အမေရိကန် တပ်များကို တဖြည်းဖြည်း ရုပ်သိမ်းသွားမည်ဟု ထရန့်ပြော